प्रधानमन्त्रीलाई चुनाव लागिसक्यो, तर मिति तोक्न केले रोक्यो ? – Nepal Press
प्रधानमन्त्रीलाई चुनाव लागिसक्यो, तर मिति तोक्न केले रोक्यो ?
२०७९ असार ९ गते १७:३५
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले ल्याएको परिणामबाट उत्साहित छन् । पाँचदलीय गठबन्धन गरेर भएपनि कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाएपछि देउवाको ध्यान अब संसदीय निर्वाचनतर्फ केन्द्रित छ ।
सत्तारुढ गठबन्धनमा कुनै राजनीतिक संकट आउनुभन्दा पहिले नै संसदीय निर्वाचनका लागि बलियो आधार तयार पार्न देउवा चाहन्छन् । यहीकारण जतिसक्दा चाँडो प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन मिति तोक्न देउवाले हतारो गरिरहेका छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचनपछि सत्ता गठबन्धनमा केही राजनीतिक अप्ठ्याराहरू देखापरेका छन् । कांग्रेससँगको तालमेलबाट सोचेजति लाभ नभएको निष्कर्षमा रहेका गठबन्धनका घटकहरूलाई आफूसँगै राख्नुपर्ने चुनौती प्रधानमन्त्री देउवासामु छ । गठबन्धनका सबैजसो दलभित्र जारी आन्तरिक विवादका कारण आफू नेतृत्वको सरकारमा समस्या नआओस् भनेर देउवा सचेत छन् । यहीकारण ३ सातादेखि नेकपा एसका मन्त्रीहरू हेरफेरको सिफारिस कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।
जसपा विवादमा सहजीकरण गर्न डा. बाबुराम भट्टराई पक्षले गरेको अनुरोधमा निरपेक्ष बसेका छन् । त्यस्तै सरकारमै नभएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसँग वार्ता गर्दै उसका माग पूरा गराउन सक्रिय छन् ।
सरकारका एक मन्त्री पनि प्रधानमन्त्रीको प्रस्तुति र निर्देशन चुनावलक्षित भइसकेको बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीलाई चुनाव लागिसकेको छ । केही राजनीतिक परिस्थिति नमिलेर मात्रै घोषणा हुन ढिलाइ भएको हो’, ती मन्त्रीले नेपाल प्रेससँग भने ।
प्रधानमन्त्री देउवाले निकटस्थहरूसँग आफू जतिसक्दो चाँडो निर्वाचन होस् भन्ने पक्षमा रहेको बताउँछन् । वामगठबन्धन ब्युँतने खतरा यथावत रहेको भन्दै उनी चुनावसम्मै आफ्नो सरकार, गठबन्धन र तालमेल जोगाउन चाहन्छन् । गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकमै प्रधानमन्त्री देउवाले संसदबाट गराउनुपर्ने काम जतिसक्दो चाडो सकेर चुनावकेन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । मधेशमा राजनीतिक एजेण्डा बनेको नागरिकता विधयेक संसदबाट पारित गराउन प्रधानमन्त्रीको पहल चुनावी तयारीकै रणनीति हो ।
‘प्रधानमन्त्रीको दिमागमा अहिले निर्वाचन मात्रै छ । निर्वाचनसम्म गठबन्धनलाई जोगाएर लानेगरी उहाँले भूमिका निर्वाह गर्नुभएको हो’, देउवानिकट एक नेताको भनाइ छ । ती नेताका अनुसार प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन तयारीको खाका कोर्न पार्टीका केही नेताहरूलाई जिम्मा पनि दिइसकेका छन् ।
‘गठबन्धन र तालमेलबारे केही नेताहरूले आन्तरिक तयारी गरिरहनुभएको छ । बजेट अधिवेशन सक्नासाथ चुनाव घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ’, प्रधानमन्त्रीनिकट कांग्रेस नेताको भनाइ छ ।
सत्तारुढ गठबन्धनका अन्य घटकहरू भने आन्तरिक विषय मिलाएर मात्रै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । निर्वाचनको मिति तोकेपछि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल कायमै रहने वा सकिने भन्नेमा कानूनी प्रष्टता हुनै बाँकी छ । प्रतिनिधिसभाको ५ वर्षे कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिलाई आधार मान्ने वा शपथ ग्रहणको मितिलाई मान्ने भन्नेमा पनि विवाद छ ।
संसद निष्क्रिय भएमा संसदमै विचाराधीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्धको अर्को प्रश्नले पनि सत्ता गठबन्धनलाई पिरोलेको छ । यहीकारण तत्कालै निर्वाचन मिति तोकिनेमा गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू नै विश्वस्त छैनन् ।
‘प्रधानमन्त्रीलाई चुनाव लागेर मात्रै हुँदैन राजनीतिक र कानूनी कुराहरू मिल्न बाँकी नै छ । त्यसैले भरे-भोलिमै चुनावको मिति तोकिन्छ भन्ने कुरा अनावश्यक अन्दाज मात्रै हो’, गठबन्धनका एक शीर्ष नेताले भने ।
प्रकाशित: २०७९ असार ९ गते १७:३५
संसद भंग गर्नेहरू अधिनायकवादी हुन् : रामचन्द्र पौडेल
जनताप्रति उत्तरदायी शासन संसदीय लोकतन्त्रमा मात्रै सम्भवः प्रधानमन्त्री देउवा (भिडिओ)
कांग्रेसमा शेखर कोइराला समूहको बेग्लै भेला, यस्ता छन् छलफलका एजेण्डा
यतिका सेना, प्रहरी र कर्मचारी किन चाहियो, कटौती गरौं: प्रदेश सभापति बानियाँ
अन्योलमा अर्घाखाँचीको छत्रदेवको गाउँसभा
सरकारले अमेरिकालाई एसपीपीमा संलग्न नहुने पत्र पठाइसक्यो : गृहमन्त्री
आफ्नै सरकारले ल्याएको बजेटको गुनासो बोकेर प्रधानमन्त्री भेट्दै सुदूरपश्चिमका मन्त्री
संघ र प्रदेश चुनावमा कांग्रेसलाई बहुमत ल्याउन रोक्ने ताकत कसैसँग छैनः उपसभापति खड्का
प्रेस युनियनको महाधिवेशन हेटौंडामा, असार २० भित्र मतादाता नामावली टुंग्याइने
‘अर्थर गन’ नेपाल आउँदै
देउवालाई रामचन्द्रको कटाक्ष- समय पुगेन भनेर दगुरिराख्‍ने, काम पनि अलपत्र पारिराख्‍ने
आयल निगमलाई ८ अर्ब रुपैयाँ दिँदै सरकार
युक्रेनमा पुटिनको आक्रमण ‘विषाक्त पुरुषत्वको उत्कृष्ट उदाहरण’ हाे : जोनसन
कम्पनीले २८६ गुणा बढी तलब हालेपछि….
काठमाडौंमा दुई महिलालाई सहायक सीडीओको जिम्मेवारी
यसपालिको रोपाइँमा पनि रेस्लर जुरेली चर्चामा, अपरिचितले हिलोमा पछारेको गुनासो
रिसोर्टमा बेलुका बसेका थिए, बिहान उठेर युवतीले भनिन्- बलात्कार भयो
गौशालामा भेटिए ‘जुम्ल्याहा’ मोटरसाइकल ! तत्काल समात्न ट्राफिक प्रहरीको निर्देशन
बुढीगंगाको मतगणना मुद्दा- सुनुवाइअघि जब कामु प्रधानन्यायाधीशको च्याम्बरमा महान्यायाधिवक्ता छिरे
स्थानीय तहमा निर्वाचित अखिलका नेता सम्मानित, को-को भए सफल ? (तस्बिरहरू)
माधव नेपालको गुनासो- फिर्ता भएका मन्त्री बोल्नै छाडे